Mashiinka tolida ee Lidl, ma u qalantaa?
La Mashiinka harqaanka Lidl Waa mid ka mid ah alaabooyinka aan ka labalabayn karno wax yar. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxay leedahay qiimo aad u hooseeya dhammaan sifooyinka ay ina tusinayso. Sidaa darteed, dad badan ayaan ku qanacsanayn calaamadda cad ee alaabta noocaan ah.
Dabcan, dhanka kale, ma joojinayno inaan ka fikirno, gadaashooda, shirkadaha caanka ah waa la qarin karaa. Waxay noqon kartaa xal wanaagsan qof kasta oo raba inuu yeesho hawlaha aasaasiga ah ee a mashiinka tolida, is haysta oo badan oo raaxo leh. Soo hel dhammaan tayada mashiinka tolida ee Silvercrest!
Astaamaha Mashiinka tolida Lidl
Hoos waxaan ku muujin doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu waaweyn Astaamaha mashiinka dharka lagu tolo ee Lidl:
Maanta suuqa waxaan sida caadiga ah ka heli mashiinnada korontada. Waxaa meesha ka baxay mashiinadii ugu qadiimiga ahaa ee u adeegsan jiray awoodda aadanaha si ay ugu shaqeeyaan. Xaaladdan oo kale, waxay leedahay matoor kaas oo xakameyn doona dhammaan hawlaha mashiinka la sheegay.
raaxo leh oo adkaysi u leh
Baahnayn in la sheego, sidoo kale waa arrin is haysta oo adkaysi u leh. Xaggeeda, waa in la yiraahdo way ku adag tahay wax dhaqdhaqaaq ama buuq ah marka aan dhigno dusha sare ee meesha aan u shaqeyneyno.
Tolo marooyin qaro weyn
Inkasta oo mashiinka noocan oo kale ah uu had iyo jeer ku habboon yahay dharka ugu fudud, Mashiinka tolida ee Lidl waxa uu xamili karaa dhar qaro weyn. Tusaale ahaan, waxaad isku dayi kartaa dhogorta dhogorta, iyo sidoo kale tolida iyo xitaa dhar fidsan.
Astaamaha Aasaasiga ah ee soo jiidashada leh
Kala xisaabtan afar cabbir oo godad badhan oo toos ah. Si la mid ah, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto qaar ka mid ah daabacadaha aasaasiga ah, samaynta tolida codsiyada iyo daboolka. Guud ahaan waxaad heli doontaa ikhtiyaarka 33 dhibcood ee hawlaha. Iyo sidoo kale dhibco irbad laba jibaaran.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ayaa noqon kara dunta. Laakiin kiiskan, mashiinnada dharka Lidl ma lahaan doontid. Waxay leedahay nooc ka mid ah nidaamka mashiinka si aad u raacdo talooyinka. Habkaas kuma boodi doontid wax tillaabo ah.
Qalabka tolida ee Silvercrest
Waa in la sheegaa in marka la eego qalabyada, mashiinka tolida silvercrest ayaa qaar ka badan mashiinada caadiga ah fudud. Waxaan horay u soo sheegnay laakiin mid ka mid ah qalabka lagama maarmaanka ah waa dunta. Dabcan, cagaha hore midna kama foga. Waxay lama huraan u yihiin maryaha ugu jilicsan si ay u xasilaan. Waxa kale oo ka mid ah in la sameeyo godad badhanka iyo mid kale oo la dhigo badhanka.
Uma baahnid in aad ka werwerto haddii wax liin ah uu soo galo mashiinka dharka ee Lidl, maadaama uu la socdo burush yar si looga saaro. Waxaan sidoo kale haysannay dhalo saliid ah iyo sidoo kale dunta midabka leh. Dabcan, lama huraanka ayaa naga dhigaya inaan ka hadalno cirbadaha. Xaaladdan oo kale, dhib ma yeelan doontid sababtoo ah mishiinka ayaa la socda dhowr.
Dhammaantood waa isku tiro, 90-14, laakiin sida aad ogtahay waa midka caadiga ah. Markaa, dhib kama heli doontid helitaankooda. Ugu dambeyntii, keen saddex kaashawiito oo cabbirro kala duwan leh, suufka dareemada iyo suufka baallaha elektarooniga ah.
Sida loo bilaabo isticmaalka mashiinkaaga tolida cusub ee Lidl
Haddi aanad aaggan waxba ku baran, waa run inay marka hore yara dhib badnaan karto. Tilmaamaha dhow waa shay aasaasi ah oo lagu awoodo in lagu bilaabo tallaabo ammaan ah. Waxaan dhigi doonaa dunta ugu horeysa ee dunta. hubaal haddii aad rabto samee laba tolmo, waa inaad laba meel dhigtaa markiiba. Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad u dhigto si toos ah iyo toosan.
Haddii aan mar hore dooranay dunta, waxaan sidoo kale u baahanahay bobbin caag ah si aan u haysanno. Si taas loo sameeyo, waxaan ka gudbi doonaa ayaa sheegay in dunta dhex calaamadaha in mishiinka tilmaamayo. Xajinta dunta, waa waqtigii la shidi lahaa mashiinka tolida. Waxaan si tartiib ah ugu talaabsaneynaa badarka si duntu u dabeeyso. Markaan haysano, waa inaan ku dhejinnaa tuubada waxa loogu yeero biraha bobbin kiis kaas oo ku dhex jira mishiinka.
Hubi inaad si fiican u hagaajiso. Ugu dambeyntii, waxaan u baahannahay inaan mar kale marno dunta sida waafaqsan sawirada mashiinka si looga dhex maro cirbadda. Kaliya markaas, waxaan bilaabi karnaa tolida. In kasta oo ay u muuqato in ay yara adag tahay marka wax laga qabanayo, waa in la sheegaa in wax walba ay yihiin ku-dhaqan. Faa'iidada aan ku leenahay mashiinka noocan oo kale ah ayaa ah in calaamadahaas aan soo sheegnay in badan ay nagu caawinayaan.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leeyihiin mishiinada tolida Lidl
Faa'iidooyinka, waxaan ka hadli karnaa raaxada iyo caabbinta. Wax ku dhaca mashiinno badan oo qaabkan ah. Dabcan, kiiskan, waxay leedahay qiimo jaban. Haa, waxay noqon doontaa mid kale oo ka mid ah tayada ugu fiican, wanaagga iyo sida, faa'iidooyinka. Waxay leedahay qalabyo dhawr ah, iyo sidoo kale tiro ka badan oo ku filan oo tolmo ah. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya ku habboon dharka ugu fudud iyo kan ugu fiican, laakiin sidoo kale waxay ku dhiirran tahay kuwa yar oo dhumucdiisuna tahay. Inkasta oo ay xoogaa soo jiidasho leh, haddana ma qaadi karno qalabyada ama tirada tolmooyinka kala duwan ee aan ku guuleysan karno. Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelato faahfaahinta sida kiiskii bobbin oo ah macdan oo aan ahayn caag, tusaale ahaan. Sidan, waxay noqon doontaa mid aad u adkaysata.
Mashiinnada tolida ee noocaan ah waxay ku fiican yihiin isticmaalka hooseeya. Taasi waa, waayo wax ka hagaaji guriga laakiin maaha in wax lagu sameeyo dadka waaweyn. Haddii aad tixgeliso isticmaalka soo noqnoqda, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn mid sax ah. Dhanka kale, waxaa jira fikrado badan oo isku raacsan in mararka qaarkood ay ku dhegi karto. Waa maxay waayo-aragnimadaada mashiinkan tolidda?
Ka iibso mashiinka dharka lagu tolo ee Lidl
Mashiinka tolida ee Lidl had iyo jeer lagama helo dukaamada. Waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa buugaagta xayaysiinta ama boggaaga halkaasna waxaad ku arki kartaa markaad iibsan karto mashiinka.
Dhaqso oo ha sugin maalinta u dambaysa si aad u iibsatid sababtoo ah marka la eego caannimadiisa, waxay u egtahay inay si fudud u dhammaato maadaama aysan badiyaa iman cutubyo badan.
Waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka ah inaad iibsato mid kale oo ka mid ah moodooyinka Mashiinka dharka tolida in Lidl lagu iibiyo 99 euro. Haddii aadan ka heli karin wax bixinta buug-yaraha, waad iibsan kartaa halkan sidoo kale
Mashiinka dharka » Mashiinka harqaanka Lidl
168 faallooyin ah "Mashiinka tolida Lidl"
Maarso 18, 2018 markay ahayd 11:09 am
Waxaan haystaa SilverCrest ee Lidl, ma aha kan si gaar ah laakiin qaabka, wakhtigaas waxay ku kacday € 100 inkastoo aan mar hore sheegay in aysan ahayn qaabkan. Waxaan u maleynayaa inay ku habboon tahay kuwa raba inay bilaabaan. Waxaa la i siiyay 10 sano ka hor dhalashadayda markii ugu horeysay ee aan xiiseynayo sameynta dharka ilaa hadda waa mashiinka aan isticmaalo maanta. Marka aan ka hadlo isticmaalka, waxaan ula jeedaa isticmaalka maalinlaha ah tan iyo markii aan nafteyda u huray tan. Waxaan sameeyay noocyo kala duwan oo dhar ah, inkastoo mararka qaarkood ay adag tahay, haddana igama niyad jabin. Waxaan tolay faashad, maryo, cudbi, satin, maqaar, iwm. iyo sidoo kale dufcad wax soo saar ah oo u dhexeeya 30 -40 dhar, horyaalkiina waa uu joogaa.
Sida iska cad waxaa jira mashiinno aad uga wanaagsan oo shaqadaada u fududayn doona oo dhaqso badan, laakiin waxa aan rabo in aan idhaahdo waa haddii aad taqaan sida loo maareeyo oo aad u daryeesho daryeelkeeda iyo ku hayso xaalad wanaagsan, waxay ku siinaysaa wax badan oo dheeraad ah. lafteedu waxay u muuqataa.
Maarso 19, 2018 markay ahayd 8:47 am
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida khibradaada Andrea.
Juun 30, 2018 markay ahayd 1:25 pm
Sideen u iibsan karaa mishiinka lidka
July 2, 2018 saacadu markay tahay 6:36 pm
Waa inaad sugtaa inta uu Lidl ka bixinayo bixinta. Ilaa ay ka dhacdo, ma jirto si kale oo lagu qabto.
Caadi ahaan waxay ku xayeysiiyaan telefiishanka, iyagoo ku dhejinaya boodhadhka dukaamada waaweyn 15 maalmood ka hor iyo buug-yaraha xayeysiinta.
Ogosto 5, 2019 markay tahay 3:41 pm
Galab wanaagsan, waxaan haystaa daboolka Lidl oo ay si lama filaan ah u joojisay tolida, ma la hagaajin doonaa?
Ogast 12, 2019 at 11:17 am
Way adagtahay in laga jawaabo su'aashaas adoon awoodin in la ogaado dhibaatada. Sharadkaaga ugu fiican waa inaad ka hubiso Silvercrest taageero farsamo oo aad u sheegto waxa kugu dhacay.
Janaayo 5, 2020 markay ahayd 4:58 pm
Hello, waxaan haystaa mashiinka dhaqanka heesaha.
Waxaa iga lumay buuggii wax lagu tilmaami lahaa, waxaana dhibaato iga haysta tolnimada ka boodaya tolmada
Sebtember 9, 2018 at 11:03 pm
Waxay ku iibiyaan si isku mid ah Carrefour, in kasta oo aysan ahayn Silvercrest, waxay leedahay calaamad kale, laakiin waa isku mid. Waxa aan haystay Lild ka dhawr sano hadda mana xuma. Waxay igu kacday €69.
Sebtember 10, 2018 saacaddu markay ahayd 9:29 am
Runtu waxa ay tahay in aanu gabi ahaanba ka war qabin in Carrefour ay iibisay mishiin la mid ah kii Lidl. Waxay noqon kartaa, dhab ahaantii, alaabooyin badan oo noocyo kala duwan ah ayaa la iibsadaa jumlado ka dibna waxaa lagu magacaabaa calaamadda calaamadda u dhiganta, markaa waxa aad tiraahdo ma noqon doonto mid la yaab leh. Waxaan noqon doonaa feejignaan.
Diisambar 22, 2018 markay ahayd 11:41 pm
Ma ogtahay inay tahay astaanta Klindo? Midka Carrefour… mahadsanid!
Ka mid noqoshada
February 15, 2019 at 9:54 waxaan ahay
subax wanaagsan Maria,
Waxa aan ka soo iibsaday online wax ka yar 48 saacadoodna waxaan ku helay guriga.
Febraayo 15, 2019
Febraayo 18, 2019 markay ahayd 9:22 pm
Hi, weli ma isku dayday? Ma ku talisaa?
Maarso 5, 2019 markay ahayd 4:30 pm
Encarna, gaaskee iibsaday? Carrefour's? Ma ii sheegi kartaa summada iyo qiimaha fadlan?
July 7, 2020 at 10:11 waxaan ahay
Midda jaban uun baan ka iibsaday Carrefour. 50 Euro oo laabta ah
Si aan u barto waxaan raadinayey shay asaasi ah. Ma xuma, waxay fulisaa hawlaheeda aasaasiga ah, laakiin waxay igu kallifaysaa inaan dunta si sax ah loo hayn. Waxaan u malaynayaa in taasi khaladkaaga tahay. Waxaan isku dayay oo dhan danab iyo waxba.
Sebtember 14, 2019 at 12:08 pm
Hello, wanaagsan shalay waxaan iibsaday mid oo ku yimid biin la'aan, ma jirtaa fursad aad iigu soo diri karto pin-ka? Taasi waxay ahayd ka kaliya ee hadhay.
Sebtember 16, 2019 saacaddu markay ahayd 9:39 am
Waa inay kuu soo diri karaan laakiin waa inaad tagtaa dukaanka Lidl oo aad ka soo iibsatay oo aad u sheegtaa waxa kugu dhacay. Xaaladda ugu xun waxay kuu sheegi doonaan inaysan ku heli karin laakiin waxay kuu soo celin doonaan lacagtaada, ugu yaraan waa inay sameeyaan.
July 19, 2018 saacadu markay tahay 1:10 pm
Salaamu calaykum, waxaan haystaa mishiinka lacagta lagu shubo, aad baan u faraxsanahay, laakiin mararka qaarkood way ku dhegtaa, mar walba waan hagaajiyaa dhib la'aan sababtoo ah waxaa jira dunyo ku dheggan, laakiin markan waan kala furfuray oo waxba ma jiraan, ma sameeyo. ogow waxa la sameeyo, waan arkay oo faallooyinkaaga adigaa ka taliya, aan aragno waxaad leedahay
July 25, 2018 at 9:47 waxaan ahay
Waxaan haystaa qalinka qalinka ah sidoo kale laakiin mararka qaarkood way ku dheggan tahay mar walba waan awooday inaan hagaajiyo inkasta oo markan aysan suurtogal ahayn ma jirto si aad talo ii siiso waxaan haystaa sawiro dhibka ma ahan tuubada hore ayaan u eegay.
28-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 7:20 pm
Anigu isku mid ayaan ahay, dunta bobbinka ahi ima qabato. Waxaan isku dayay wax kasta oo lagu taliyay, laakiin iima ay shaqayn.
Ogast 30, 2019 at 9:45 am
Miyuu jiraa qof og haddii mashiinkan tolidda uu leeyahay cudud bilaash ah? Aniga aad bay muhiim iigu tahay. Mahadsanid
Maarso 16, 2019 markay ahayd 8:54 pm
Hello. Sida aan arko inaad wax badan u isticmaasho, ma jiro qof adiga kaa fiican oo i caawin kara. Wax baa ka khaldan mashiinkayga sababtoo ah wuu tolaa laakiin ma tolo Irbadu way jeexjeexaysaa oo ma hagaajin karo. ma i caawin kartaa??? Mahadsanid!!! Maalin wanaagsan
Ogosto 28, 2019 markay tahay 7:33 pm
Fiiri internetka sida loo hagaajiyo cirbadda cirbadda, sidoo kale booska carsaanyada, gabal ka baxsan kiis bobbin oo leh laba dhibcood.
Haddi ay soo marin waayaan goobta saxda ah iyo wakhtiga, waxa suurtogal ah in aanay dunta soo qaadin.
Noofambar 24, 2019 saacaddu markay ahayd 8:37 pm
Salaan, qofna ma garanayaa haddii mashiinka dharka lagu tolo ee Lidl, dhaqanka heesaha, uu leeyahay dunta toosan? Hooyaday ayaa u soo iibisay, wax fikrad ahna ma hayso, aniguna xataa in yar. Mahadsanid
June 22, 2020 at 9:46 waxaan ahay
Haddii aad leedahay
tiir qurux badan
Maarso 19, 2020 markay ahayd 10:54 pm
Waa dunta iyo cirbadaha ka iibsada dukaamada alfa
Maarso 19, 2020 markay ahayd 9:41 pm
Salaan, ma i caawin kartaa?Waxay ii siiyeen tan hadiyad ahaan, markii aan dunta dunta ka tolo oo ay diyaar u tahay in la bilaabo tolidda…
July 10, 2020 saacadu markay tahay 6:35 pm
Sidoo kale waxaan haystaa 5 sano oo aad u fiican aad ayaan u faraxsanahay
Maanta oo kale si fiican uma tolaan oo waxaan raadinayay fikrado si aan u arko haddii aad i caawin karto fadlan,
Waxay iga dhigaysaa tolmo aan tol lahayn oo laalaabto, waxaan beddelay dunta, waxaan beddelay dunta, xitaa ma jiro wax jebiya dunta sare…. ma garanayo waxa ay noqon karto.
Diisambar 10, 2020 markay ahayd 3:31 pm
Maarso 22, 2018 markay ahayd 1:06 pm
Hello, waa maxay farqiga u dhexeeya S1 iyo S2 ee taayirrada mashiinka dharka ee Lidl. Waan iibsaday oo waxay iila muuqdaan tolmo isku mid ah. Mahadsanid.
Maarso 22, 2018 markay ahayd 1:11 pm
U rogitaanka giraangirahaas ayaa wax ka beddelaya dhererka tolmada. Inta uu sii weynaado tirada lagu doortay garaaca, waa sii dheeraanaysaa dhererka tolida.
Maxaa kugu dhici kara waa in maadaama boosaska ugu horreeya ay yihiin dherer aad u yar, farqiga ayaa si dhib leh loo qadarin muuqaal ahaan.
10-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 8:16 pm
Salaan wanaagsan, galab wanaagsan, su'aashaydu waxay tahay sababta garaacista dhererka tolmada uu u leexan waayay meel kasta, waa cusub yahay, hal mar kaliya ayaan isticmaalay mana dooran karo dhererka tolitaanka.
Maarso 28, 2018 markay ahayd 6:01 pm
Waxaan soo iibsaday laba sano ka hor aniga oo aan wax fikrad ah ka haysan tolida, waxaan maskaxda ku hayay fikradda, mashiinka daabacaadda tirooyinka otomaatiga ah waana waxa aan u isticmaalo. Waxaan u naqshadeeyay kombuyuutarka oo uu si toos ah ugu dhejiyay marada. By habka waxaan ka heli xoogaa lacag ah daabacaadda.
Abriil 2, 2018 markay ahayd 8:57 am
Shaki la'aan, waa mashiinka tolida ee ugu fiican in lagu bilaabo, laakiin kala duwanaanshaha suurtogalka ah ayaa aad u ballaaran, sidaad sheegtay. Waan ku faraxsanahay iyada.
Juun 7, 2019 markay ahayd 3:00 pm
Hi nimanyahow, waxaan haystaa mishiinka Lidl, qalinka qalinka. Waxaan ahay bilawga tolida waana jeclahay Dhibka i haysta ayaa ah in dunta sare mar walba jabto. Kun jeer ayaan hubiyay haddii ay si fiican isugu xiran tahay, wax walba waa sax. Irbada ayaan sidoo kale bedelay. Waa dhiirigelin haddii aad u baahan tahay saacad si aad u tosho ilaa 20 cm, sababtoo ah duntu had iyo jeer way jabtaa. Waxaan gartay in ay jabto haddii aan haysto laba maro oo aan ku biiro iyo haddii aan gadaal u dhigo, inta badan waxay jebisaa meesha cirbadu taal. Dulku ma aha mid tayadiisu hoosayso, markaa maxaan sameeyaa? Waa khalad?
Maarso 26, 2020 markay ahayd 1:49 am
Hello Natasha. Taas oo kale ayaa igu dhacda oo aan madashan ka helay adiga iyo naag kale ayay kugu dhacday. Ma ku guulaysatay inaad xaliso? Mahadsanid
Oktoobar 27, 2020 at 9:00 am
Hello Carmen, fadlan ma i caawin kartaa, lambarka irbadda ee uu isticmaalo mashiinka Silvercrest?
Juun 2, 2020 markay ahayd 1:25 pm
Isla sidaas ayaa igu dhacda
Oo anigu ma garanayo sida loo hagaajiyo, haddii cidi garanayso waxa dhibku yahay
Oktoobar 26, 2019 markay tahay 3:39 pm
Hi, adduunkaan waan ku cusubahay oo waxaan ka soo iibiyay lacagta qalinka ah ee lidlonline 55 euro.
Waxaan bartay sida loo tolo YouTube-ka wayna ii fiican tahay, wax walba waan sameeyaa! waxyaabaha aasaasiga ah, dabcan, iyo in la sheego in aan tolay laastikada, dhar wanaagsan iyo jeansiinta. Way ku habboon tahay in la bilaabo tolidda.
Abriil 8, 2018 markay ahayd 5:08 pm
Hello Jorge, haddii aad waqti haysato waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aad u samaynayso naqshadaynta kombuyuutarka mashiinkaaga. Aad ayaan ugu xanuunsanahay guriga waxaanan jeclaan lahaa inaan isku madadalo inaan samaynayo waxyaabo hal abuur leh.
Abriil 14, 2018 markay ahayd 11:21 am
Hello Jorge, ma ii sharaxi kartaa sida aad u sameysid dharka?
Juun 2, 2018 markay ahayd 3:31 pm
Barnaamijkee ayaad ku nashqadaysaa sideese aad kaga heli kartaa cidhifka kombayutarka??? Maan ogayn inaad taas samayn karto...
Juun 13, 2018 markay ahayd 1:09 pm
Mashiinkee ayaad u jeedaa? Immisa ayay ku kacday? Oo halkeed ka iibsatay? jawaabtaada waan sugayaa Mahadsanid
Abriil 11, 2021 markay ahayd 9:39 am
Ma waxaad ka hadlaysaa mashiinka dharka lagu tolo ee Silvercrest?? Sideed ugu wareejisaa naqshadaha kombiyuutarka una wareejisaa mishiinka?
Abriil 28, 2018 markay ahayd 8:02 am
Hello Nacho Waxaan xiiseynayaa inaan iibsado sidee ku heli karaa hadda.
3-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:03 am
Lidl hadda ma iibiyo laakiin haddii aad rabto inaad hadda iibsato, waxaad ka heli kartaa halkan: https://amzn.to/2rjSIL9
Abriil 28, 2018 markay ahayd 9:24 pm
Waxaan haystaa mashiinka dharka lagu tolo ee SILVER CREST. Wali sanad ma gaadhin, nalka ayaa shidan, baallaha ayaan ku dhuftay laakiin ma shaqaynayo, ma garanayo inay noqon karto matoorka ama meesha aan ka qaado, waxaan ka soo iibsaday Lidel.
3-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:08 am
Haddii mashiinkaagu aanu weli gaarin hal sano oo uu dhaawacmay, waxa fiican inaad isticmaasho dammaanadda. Si aad tan u samayso waxaad:
1 – Aad dukaanka weyn ee Lidl oo aad ka soo iibsatay mashiinka dharka lagu tolo. Hubaal inay kuu qaadi doonaan ama ay ku siin doonaan macluumaadka xidhiidhka tooska ah ee adeega dayactirka.
2 - Waxaad u qori kartaa Lidl iyaga oo isticmaalaya foomka xiriirka
3 - Waxaad wici kartaa lambarka adeegga macaamiisha ee Lidl (902 243 222) laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 20 galabnimo.
Waxaan kugula talineynaa ikhtiyaarka ugu horreeya maadaama uu yahay kan ugu tooska ah waxayna ku siin doonaan xal degdeg ah.
Sebtember 25, 2018 at 5:42 pm
Olga, marka hore hubi haddii taageerada lagu sameeyo bobbins ay tahay dhammaan jidka bidix, taas oo ah booska tolida.
Haddii ay dhinaca midig tahay, taas oo ah booska buuxinta bobbin, mashiinku ma toli doono.
Waxay u muuqataa doqonnimo laakiin hooyaday way awoodi wayday inay tolto laba toddobaad ilaa aan ogaaday dhibaatadan.
4-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 9:35 pm
Halkeen ka iibsan karaa bobbins-ka iyo makiinada-siibka ee mashiinka tolidda.
5-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:54 pm
Labada mashiin ee tolida Lidl kee baad haysaa? Silvercrest mise Fanaanada?
10-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 12:33 am
Hello, ma ii sheegi kartaa farqiga u dhexeeya mishiinnada ay Lidl iibiso: lacagta qalinka ah iyo maamulka hoose, fadlan? Keebaa xadidan?
10-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 1:42 pm
Silvercrest aad ayuu u xaddidan yahay laakiin dabcan, waa mishiin aad uga jaban kan heesta.
Waxay ku xiran tahay xoogaa khibradaada iyo baahiyahaaga. Labaduba waa mashiinnada tolida guriga oo wanaagsan, laakiin heesaagu waa, ra'yigeenna, aad u dhammaystiran oo ay kuu fududaan doonto inaad u hesho qaybo ama qalabyo.
Maarso 7, 2019 markay ahayd 9:48 pm
Halkee baan ka heli karaa fiilada fiilada leh badarka?
Noofambar 7, 2019 saacaddu markay ahayd 1:57 pm
Sidee u yahay mashiinka dharka lagu tolo ee sumadda Lervia, waxay iga iibiyaan gacan labaad, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado marka hore sida ay u shaqeyso iyo haddii ay tahay mashiinka wanaagsan?
Noofambar 11, 2019 markay ahayd 8:43 am
Ma aanan garanayn mashiinka Lervia iyo wixii aan awoodnay inaan aragno, waxaa lagu iibiyaa kaliya gacan labaad, markaa kuma talineyno iibsigooda.
Haddii aad qabto wax dhibaato ah ama aad u baahan tahay qayb spare part, dhab ahaantii waxa ay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in aad hesho.
Diisambar 16, 2018 markay ahayd 11:02 pm
Waad salaaman tahay, wax badan ma kordhisaa haddii aad si yar u siiso badelaha?
Waa kuwa badan oo aad u toogtay waxaanan rabaa mid fudud.
Febraayo 20, 2019 markay ahayd 1:30 pm
Hi, waxaan ahay Margarita, waxaan haystaa lacagta qalinka ah mana garanayo meel aan ka heli karo qalabyada. Ka sokow beryahan dambe mar kasta oo aan rabo in aan dunta sare ka tolo boodada iyo jebinta iima ogola in aan tolo. Waxaan mar hore beddelay astaanta dunta iyo cirbadaha oo weli waa sidii hore. Maxaa noqon kara? mahadsanid
Febraayo 20, 2019 markay ahayd 2:44 pm
Xaqiiqdu waxay tahay inay aad dhif u tahay, taasi maaha inay kugu dhacdo. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad isku daydo inaad waydiiso adeegga farsamada haddii ay weli ku hoos jirto dammaanad.
Abriil 26, 2019 markay ahayd 2:58 am
Salaan, isla sidaas oo kale ayaa igu dhacda, dunta kor ku xusan ayaa booday oo gooyay oo way sii daysay, ma garanayo waxa ay noqon karto, waxaan mar hore isku dayay inaan ka saaro xiisadda, waxaan bedelay dunta, iwm. weli waa sidii hore. Ma garanayo waxaan sameeyo si aan uga dhigo mid shaqaynaysa.
Juun 25, 2019 markay ahayd 1:32 pm
Haddii duntu jabto, waa sababta oo ah waa inaad dabcisaa dunta bobbin, furka yar ee qaada si uu u furto...Wax yar Reyes, waa maxay cagaha riixaya ee loo isticmaalo tolida caadiga ah sababtoo ah ma garanayo runtii taas mid waa... Way i siiyeen waana qumman tahay mahadsanid
9-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:37 pm
Waxaa la og yahay inta jeer ee kaarka qalinka ahi uu ka soo baxo Lidl, mahadsanid.
10-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 1:39 pm
Mashiinka tolida ee Lidl waxa la soo bandhigaa inta u dhaxaysa 3 iyo 4 jeer sannadkii. Waxay u badan tahay in dhowr bilood gudahood ay dib u xayeysiin doonaan laakiin ma naqaano si aan kuu sheegno taariikh gaar ah.
Janaayo 16, 2019 markay ahayd 6:38 pm
Hello, waxaad ka iibsan kartaa lidl online
12-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 11:56 pm
Salaan, halkeen ka heli karaa qaybo dheeri ah oo loogu talagalay Silvescretst?
14-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 9:39 am
Si aad u soo iibsatid qaybo ka mid ah mishiinka tolida Silvercrest waxaad u baahan doontaa inaad wacdo adeega farsamada si toos ah oo ay ku siiyaan qaybta aad u baahan tahay.
Waxaad wici kartaa lambarka adeegga macaamiisha ee Lidl (902 243 222) laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 20 galabnimo.
19-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 11:00 pm
Aad baad u mahadsantahay Nacho.
13-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 8:44 pm
Waxa aan haystay kiish qalin ah muddo dhawr bilood ah oo ay aad u fiicnayd, laakiin taayirkayga tolidda ayaa igu dhegay, mana garanayo si aan u hagaajiyo!! Hadii aad i caawin karto...
14-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 9:40 am
Anagoon ogaanin baaxadda saxmada wadooyinka kuma caawin karno. Waxa ugu wanagsan ayaa ah in aad isku daydo in aad iska saarto macaanka adiga oo dulqaad badan lakin hadii aad wali u aragto in ay aad u dhib badantahay tag supermarket-ka aad ka soo iibsatay mishiinka una daa in ay noqdaan kuwa ku siinaya xalinta dhibaatada. .
Haddii ay ku jirto dammaanad, waxay u badan tahay inay kuugu hagaajin doonaan kharash la'aan.
17-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 8:44 pm
15-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 8:52 pm
Hello, mishiinkayga qalinka ah ayaa jabay. Ma qaado dunta fidsan. Waxaan u maleynayaa inay noqon karto in carsaanyo aan dheellitirneyn laakiin ma aqaan sida loo kala furfuro si aan u hagaajiyo. Qof iyo wuu i caawin karaa.
Waa SNM 33 A1
Juun 3, 2018 markay ahayd 4:42 pm
Hello, mashiinka dharka lagu tolo ee Lidl ma loo isticmaali karaa shaqada qashinka, sida albamada tolan ama wax la mid ah? Mahadsanid
Juun 3, 2018 markay ahayd 7:40 pm
Salaamu caleykum waraxmatulaahi wa inaa ilayhi raajicuun, waxaan ognahay inay jiraan dad isticmaala mishiinka tolida ee Lidl oo u isticmaalaya shaqooyin ay ka mid yihiin kuwa aad sheegayso, haa ka taxdar dhumucda iyo adkaanta agabka sababtoo ah haddi ay aad u adag tahay waxa laga yaabaa in mishinku aanu noqon. awood u leh inuu xamili karo ama ku qasbo injiinkaaga.
Juun 10, 2018 markay ahayd 7:46 pm
Hello Nacho, halkeen ka iibsan karaa cirbadaha mashiinka dharka tolista silvercrest? Fanaaniinta ayaa u adeegi kara?, mahadsanid horraan
Juun 11, 2018 markay ahayd 4:47 pm
Cirbadaha heesaha ayaa inta badan ku habboon mashiinka Silvercrest ee Lidl, sidoo kale waa ka tayo wanaagsan yihiin (ma aha kuwo jilicsan), duntu waxay si fiican u dhex martaa daloolka maadaama ay tahay mid dhalaalaya oo aan si fudud u jabin, iwm. Guud ahaan aad bay uga fiican yihiin.
Oktoobar 28, 2019 markay tahay 11:32 pm
Hi Nacho, waan fahamsanahay in Silvercrest uu samayn karo tolmo labanlaab ah oo heesaaguna uusan awoodin, markaa shakiga aan ka qabo labada midkood inuu iibsado.
Juun 10, 2018 markay ahayd 9:49 pm
Salaamu caleykum, ma ii sheegi kartaa marka mashiinka dharka lagu tolo ee Fannaaniinta lagu iibiyo Lidl? Mahadsanid.
Juun 11, 2018 markay ahayd 4:42 pm
Waanu ka xunahay in aanan haynin xogtaas. Lidl inta badan waxay sameeyaan ololeyaal dhowrkii biloodba mar laakiin badanaa ma haystaan ​​qaab ay kuu sheegaan marka xigta ee ay iibinayso.
Waxa hubaal ah in ay inta badan ku xayaysiinayaan TV-ga, laakiin waxa aanu kugula talinaynaa in aad fiiro gaar ah u yeelato buug-yaraha oo ay ku jiraan xayaysiisyada bil kasta.
Juun 14, 2018 markay ahayd 5:39 pm
Hello, waxaan haystaa qolof qalin ah, dhibka kaliya ee ay leedahayna waa in irbaddu ay furto, tani ma caadi baa? Waa maxay sababta ay u dhacdo? Ma leedahay xal? Mahadsanid
Juun 28, 2018 markay ahayd 1:38 pm
Waxaan jabiyay 3-dii cirbadood ee beddelka ahaa.
Halkeen ka heli karaa wax badan?
July 2, 2018 saacadu markay tahay 6:39 pm
Halkan waxaad ka heli kartaa cirbadaha beddelka ah: https://www.maquinasdecoserplus.com/accesorios/
Juun 29, 2018 markay ahayd 1:03 pm
Salaan, waxaan haystaa mishiinka Silvercrest oo maalmo aan awoodin in aan horay u socdo sababtoo ah way ku dheggan tahay, waxay ka soo saartaa dun badan oo ka mid ah gunta hoose oo ku haray sida raad oo kale ah waana in la gooyaa sababtoo ah dhammaan toliyeyaasha ayaa soo socda. ka baxay saxanka irbadda.
Waxaan hagaajiyay xiisadda dunta, saliida, la baxay oo dib u dejiyay bobbinkii oo waxaan xidhay farabadan wakhtiyo ah walina waa sidii hore.
Khibrad yar ayaan u leeyahay tolista, mana garanayo meel aan ka leexdo. Haddii xogta aan qof dhigo ay i siin karto tilmaan, aad ayaan uga mahadcelin lahaa.
July 2, 2018 saacadu markay tahay 6:37 pm
Markaad tiraahdo dhibaatadaan ayaa kugu dhacday dhowr maalmood, sidoo kale horey ma kuugu dhacday? Haddii ay tahay dhibaato aan hore kuugu dhicin, laga yaabee inaad aado dukaanka weyn ee aad ka soo iibsatay si ay u habeeyaan dayactirka dammaanadda ee suurtogalka ah.
July 1, 2018 at 8:01 waxaan ahay
Hello. Dhaqanka Heesaha 2282, oo la iibsaday sannadkii hore dhawaanna la hawlgaliyay. Meesha caadiga ah ee tolida, irbaddu waxay u leexanaysaa bidix, ma noqon karto mid dhexda u ah. Marka aad xulato tolida tolida caadiga ah, waxa ay u leexataa dhanka bidix, haddii aad u dejiso in ay buux dhaafto waxa la dhex dhigayaa bartamaha oo si sax ah ayaa loo tolaa. Waxaan u maleyneynaa inay la xiriirto dooraha, sababtoo ah haddii aad u rogto wax yar waxay udub dhexaad u tahay, laakiin markaad bilowdo tolida, mar kale ayaa khaldan. Ma i caawin kartaa?. MAHADSANID
July 2, 2018 saacadu markay tahay 6:46 pm
Waxa aad tidhaahdo, waxa aad ka guuraysaa garaaca xulashada tolista. Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa booska cirbadda, ama dhexda ama midigta.
Bogga 39 ee buug-tilmaameedka waxaad ku arki kartaa tixraac waxa aan ka faaloonayo. Haddii dhibaatadu aysan la xiriirin dhumucda dharka, irbadda iyo tolida, waxaad u baahan kartaa inaad hubiso dhinacyo kale sida booska cirbadda, saxanka cirbadda, iwm.
July 14, 2018 saacadu markay tahay 11:00 pm
hello waxaan hayaa mishiinkii heesaayey sanad ka hor si fiican ayuu u shaqaynayay,laakin hadda si dabacsan ayuu gunta ugu tolaa,waxa aan hore u eegay xiisadii walina waa sidii hore,waxa iga lumay rasiidhkii wax lagu iibsanayay,mana haysto meel aan hagaajiyo. waa, ma i caawin kartaa aad baad u mahadsantahay.
July 16, 2018 at 9:17 waxaan ahay
Xaaladdaas waa inaad geysaa adeegga farsamada ee Singer. Halkan waxaad ka hubin kartaa dhammaan SAT Maxaa jira inaad qaadato?
July 16, 2018 at 12:54 waxaan ahay
Salaan, waxay i siiyeen mashiinka dharka lagu tolo ee Victoria, waxay ka soo iibsadeen lidl dhowr sano ka hor, laakiin ma helin buuggii tilmaamaha, ma jirtaa meel lagu arko buugga, mahadsanid hore, salaan.
July 16, 2018 at 9:13 waxaan ahay
Hello Carmen, halkan waa a buug-tilmaameedka mishiinka victoria laakiin ma garanayo inay tahay modelka aad haysato.
Haddii aysan ahayn qaabkaas, noo sheeg tixraaca waanu raadin doonaa.
July 22, 2018 saacadu markay tahay 11:53 pm
Waxa aan haystay qalin qalin ah sanado...laakin waxa ay qaadatay dhawr bilood in uu si dabacsan uga tolo xaga sare
Dammaanad ma leh... waxaanan ka baqayaa in dayactirka cusubi uu badan doono.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado habaynta ay leedahay...iyo qiimihiisu in ay i dhibto ama aan la socodsiin habaynta
July 23, 2018 at 9:57 waxaan ahay
Ma samayn karno qiimeyn ku saabsan waxa dayactirka mashiinka tolidda laga yaabo inuu kugu kaco mar haddii aanaan ahayn adeeg farsamo oo aan aragno, ma garanayno khatarta cilladda ay ku siinayso.
Waxa ugu wanagsan waa in aad wacdo adeega farsamada ee Lidl (waxaad leedahay xidhiidhka boostada) waxayna ku siinayaan xigasho. Markaa waxaad horayba u qiimeysay haddii ay mudan tahay in la dayactiro iyo in kale.
July 22, 2018 saacadu markay tahay 11:56 pm
Waxaan ilaaway inaan waydiiyo mashiinka dharka la mid ah ... Waan ogahay inay si fiican u soo baxayaan laakiin aad uguma kalsoona
Talo kale ma jirtaa??Runtu waxay tahay hadda waxay igu boorinaysaa in aan wax badan ka faa'iidaysanayay oo aan hawlo badan oo badh ah qabtay.
July 23, 2018 at 9:58 waxaan ahay
U fiirso shabakadayada oo leh dalabyo iyo moodallo badan oo Alfa ama Singer ah oo aad loo qiimeeyay. Haddii aad hayso su'aalo gaar ah, noo sheeg waan ku caawin doonaa.
Ogosto 24, 2018 markay tahay 10:10 pm
Waa maxay boggaagu?
Waxaan arkay in aad kula taliso Fanaanada si ka fiican Silvercrest, sax?
Toddobaadka soo socda mashiinka tolida ee Fannaaniinta ayaa ka soo baxaysa Lidl.
Ogast 27, 2018 at 8:58 am
Mashiinka heesaha ee ay ku iibiyaan Lidl waa horyaal ka duwan marka loo eego Silvercrest, laakiin sidoo kale waa qaali.
Singerka ayaa ah in aad ka heli doonto qaybo ka mid ah bakhaar kasta, si ay ugu dambeyntii u noqoto badeecad aad u sii waarta haddii ay dhacdo burbur kasta.
Ogosto 28, 2018 markay tahay 7:39 pm
Heesaha tee baad kula talinaysaa: Dhaqan mise Fudud 3221?
aad baad ugu mahadsantahay dareenka iyo macluumaadka
Ogast 29, 2018 at 10:11 am
Midka fudud 3221 aad buu u dhammaystiran yahay.
Websaydhkeena waa sewingmachinesplus.com, waxaad ka arki kartaa barta browserka markaad na soo booqato.
July 25, 2018 saacadu markay tahay 5:41 pm
Galab wanaagsan, mashiinkaygu waa cusub yahay wuxuuna sii wadaa inuu sii daayo saliid inta aan isticmaalayo. Xadadka waa la tirtiray.
Ma garanaysaa sidaan u nadiifin karo?
July 26, 2018 at 10:10 waxaan ahay
Ma fahmin fariintaada. Ma waxaad ula jeedaa in qaybo ka mid ah mishiinka ay leeyihiin dufan? Waa wax iska caadi ah in la subiyo qaybaha dhaqaaqa laakiin waa in aanay faragalin ku samayn shaqada saxda ah ee mishiinka ama ma tirtirto wax.
Ogosto 14, 2018 markay tahay 6:27 pm
Boa goor dambe
Mashiinkan iib ma online baa?
Waxaan rabay inaan ku iibsado minha netka oo 10 jir ahaa
Ogast 20, 2018 at 11:51 am
Qaabka Silvercrest waxa kaliya oo lagu iibiyaa dukaamada waaweyn ee Lidl, laguma iibiyo onlayn. Qaabka Heesaha waxaa laga iibsan karaa online dhib la'aan.
Ogosto 21, 2018 markay tahay 2:02 pm
Waxaan haystaa mashiinka dharka lagu tolo ee Silvercrest irbadduna way jabtay. Waan iska tuuray kii jabay oo hadda ma garanayo inay wareegsan tahay iyo inay guri tahay si aan u iibsado beddelka.
Ogosto 21, 2018 markay tahay 2:28 pm
Cirbadaha mashiinka dharka lagu tolo waa isku mid. Halkan waxaad ka heli kartaa: https://www.maquinasdecoserplus.com/accesorios/
Laakin buug-gacmeedkiisa waxaad ku arki kartaa dhowr qorshe oo ku saabsan sida irbaddu u eg tahay iyo sida loo dhigo: https://www.lidl-service.com/static/4354172/54399_ES.pdf
Ogast 23, 2018 at 10:30 am
Hello. Waxaan haystay mishiinka qalin qalin ah sanad iyo badh, mararka qaarkood way ku dhegtaa oo jebisaa dunta irbadda iyada oo aan aad u kacsanayn marka ay u muuqato mid ku habboon. Mararka qaarkood adoo tolida in yar oo ka dhumuc weyn.
Intee in le'eg ayaa dammaanad qaadku? Miyaan geeyaa meesha wax laga iibsanayo? Ma ka jiri lahaa adeeg farsamo magaaladayda? Waa Caceres.
Waxaan u isticmaalaa si yar, mashaariicda yaryar inta lagu jiro xagaaga iyo fasaxyada dugsiga. Waxay bilawday inay i fashilanto dhawr maalmood ka hor
Ogast 23, 2018 at 10:34 am
Damaanad qaadku waa 2 sano laga bilaabo taariikhda iibka. Si aad u habayso, waxaad samayn kartaa mid ka mid ah falalka soo socda:
1 – Aad dukaanka weyn ee Lidl oo aad ka soo iibsatay rasiidka iibka. Hubaal inay ka qaadi doonaan ama ku siin doonaan macluumaadka xidhiidhka tooska ah ee adeega dayactirka.
3 - Wac lambarka adeegga macaamiisha ee Lidl (902 243 222) laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 20 galabnimo.
Sebtember 6, 2018 saacaddu markay ahayd 12:40 am
Hello! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan garanayo mashiinka heesaha ee lidl, waxay toshaa denim mahadsanid
Sebtember 6, 2018 saacaddu markay ahayd 10:05 am
Hello Maria Angeles,
Waxaad toli kartaa denim dhibaato la'aan, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad bedesho irbadda oo aad isticmaasho mid gaar ah oo loogu talagalay jiinis ama dhar qaro weyn.
Waxaa jira casharro badan oo online ah oo bixiya talooyin ku saabsan tolida denimka, ku talinaya dhaqidda uumiga ka hor, baraya sida dharka loogu dhejiyo mishiinka, iyo siinta tabaha sida ku dhufo dubbe naylon ah si loo simo tolmo dhumuc weyn.
Sebtember 8, 2018 at 12:48 pm
Waxaan haystaa mishiinka fidsan ee Silvercrest iyo mishiinka overlock ee heesaa, labaduba waxay ka iibsadeen Lidl qiyaastii 5 sano ka hor runtiina si fiican ayay aniga ii shaqeeyaan! Waxaan soo iibsaday markii aan baranayay qaabka naqshadaynta oo aan sameeyay dhammaan mashaariicda iyaga ku yaal.
Waxaan ka tolay maro nooca shiraac ah, ilaa jiinis, satin, chiffon.. Aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ay i siiyeen oo ay sii wadaan bixinta.
Sebtember 10, 2018 saacaddu markay ahayd 9:28 am
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida khibradaada Cristina, waxay hubaal ka caawin doontaa isticmaalayaasha kale ee shakiga qaba inay go'aansadaan. 🙂
Sebtember 15, 2018 at 7:26 pm
Waxa aan muddo dheer haystay qolof qalin ah oo tan iyo markii aan garan waayay sida wax loo tolo, waxa ay igu qaadatay muddo in aan garwaaqsado in ay gadaal u tolanayso, yacni sawirku kama soo baxo xagga sare ee waxa uu ka soo baxaa gadaasha dambe. dhar, oo ka soo jeeda dhinaca kale. Si aan u arko sawirka waa in aan dhabarka ka tolo Waa model snm 33 b1. Ma garanaysaa sida loo saxo tan??
By habka, mahadsanid this blog cajiib ah.
Sebtember 19, 2018 saacaddu markay ahayd 9:33 am
Marka hore aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin erayada aad noo hurteen. Waxaan ku faraxsanahay inaad jeceshahay boggayaga ku saabsan mishiinnada dharka.
Marka la eego dhibaatadaada, waa wax lala yaabo waxaad noo sheegto. Waligeen ma aanaan arag, waxaana ka baqayaa inaanan ku caawin karin. Way fiicantahay haddii aad wacdo shabakada taageerada Silvercrest waxayna ku siin karaan xal degdeg ah taleefanka.
Haddii aad awooddo, noo sheeg xalka ay ku siiyeen sababtoo ah waxay hubaal tahay inay caawin doonto dad badan 🙂
Noofambar 21, 2018 markay ahayd 11:27 am
Hello. Waxaan haystay mishiinka summadaha ee Silvercrest (LIDL) ilaa 10 sano. Waayo-aragnimadu waa mid aan laga adkaan karin, tan iyo markii aan sameeyo dhowr lebbis flamenco sannadkii, iyada oo natiijada ka soo baxday (xalalka) ee ruffles. Waxaan jeclaan lahaa inaan isticmaalo cagaha wax lagu riixo si aan xadhigga ugu xidho ama aan u xidho shalash. Ma ii sheegi kartaa haddii kuwa ay isticmaalaan mishiinnada Fannaaniinta ay iswaafaqayaan? Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada.
Noofambar 21, 2018 markay ahayd 11:30 am
Hello Queen, runtu waxay tahay inaanan garanayn si aan kuu sheegno.
Waxa ugu fiican ee xaaladahaas ah waa in aad tijaabiso cagta qof aad garanayso oo wata mishiinka heesaaga ama in aad soo iibsatid hadii ay ku shaqayn waydona soo celi. Waan ka xumahay inaanan ku caawin karin 🙁
Noofambar 21, 2018 saacaddu markay ahayd 6:22 pm
Waxaan haystaa mishiin dhaqameed nasiib daro ma toli karo dhar fidsan ama tolmo dhumuc leh oo jiinis ah. Wax kasta oo kale ayaa u socda si weyn, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan awood u yeesho inaan tolo dhammaan noocyada dharka dhib la'aan.
Diseembar 12, 2018 at 10:57 am
Mishiinkan ma iga caawin doonaa inaan ku shaqeeyo jeansiinta?
Diseembar 12, 2018 at 11:38 am
Cirbadda saxda ah dhib kuma yeelan doontid. Maskaxda ku hay in dharka denimku uu adag yahay, irbadda la socota mishiinkana ay dhaawacmi karto maadaama loogu talagalay maro dhuuban oo sahlan in la dalooliyo.
Diisambar 12, 2018 markay ahayd 9:11 pm
Salaan, magacaygu waa Micaela, waxaan u baahanahay mashiinka dharka lagu tolo ee shaqo gaar ah: Waa inuu tolo dhumucdiisuna tahay laba milimitir oo kartoon ah oo la riixay oo lagu daray dharka, su'aashaydu waxay tahay haddii kuwa LIDL iibinaya ay leeyihiin awooddaas iyagoon ku dhejin, iyo dammaanad qaad tolliin wanaagsan Horay mahadsanid
Diseembar 17, 2018 at 9:02 am
Ma aan tijaabin mishiinka shaqada noocaan ah sidaa darteed ma kuu xaqiijin karno 100% in la samayn karo. Waad iibsan kartaa oo haddii ay ku qanci waydo waxaad filaysay, ku beddel muddada soo noqoshada.
Diseembar 17, 2018 at 12:20 am
Waxaan u socdaa inaan naftayda siin doono mashiinka dharka lagu tolo ee Christmas-kan. Waxaan sugeynay dalabka Lidl (waxay soo baxaysaa berrito € 79), tan iyo mar walba waxaan maqlay in ay tahay mashiinka cajiibka ah, laakiin ka dib markaan akhriyo ma aqaano waxaan sameeyo, tan iyo aldy waxay leeyihiin heesaaga. €99. Ma i hagi kartaa xoogaa?
Diseembar 17, 2018 at 9:01 am
Magacaygu waa Nacho, waxaan kuugu soo qorayaa faallooyinka aad nooga tagtay mareegahayaga mashiinka dharka.
Farqiga yar ee u dhexeeya mishiinka Lidl iyo fannaanka awgeed, waxaanu door bidaynaa heesta asal ahaan sababta oo ah tirada qaybaha spare-ka iyo fududaynta helitaankooda. Sidoo kale, sababtoo ah waa Christmas-ka, waxaad ku iibsan kartaa € 94,99 kaliya, u dhaqso sababtoo ah berrito ma sii jiri doonto.
Diisambar 19, 2018 markay ahayd 11:04 pm
Iga raali noqo Nacho, sidee ku timid sababtoo ah waa Christmas-ka waxaad ku iibsan kartaa 94,99? Ilaa ay iibiso mise waxay ahayd Isniin kaliya? Anigu kama heli karo deeqdaas buug-yaraha.
Diseembar 20, 2018 at 10:31 am
Dalabku wuxuu saarnaa Amazon, hadda waa xitaa ka hooseeya 90 euro halkan.
Diisambar 18, 2018 markay ahayd 1:27 pm
Hi Nacho, dhib baa iga haysata Silvercrest, waxa aan bilaabay in aan gabadhayda u diyaariyo dharka malaa'igaha mana u malaynayo in aan heli doono. mid aan isku mid ahayn oo dunta sii jebinaysa oo xagga hoose ku dheggan.
Maxaan sameeyaa, maanta ayaan u baahanahay
Diseembar 20, 2018 at 10:32 am
Runtu waxa ay tahay in waxa kugu dhaca ay aad dhif u yihiin wayna adagtahay in lagu caawiyo adiga oo aan si toos ah u arag mishiinka. Haddii aad u malaynayso in wax walba si sax ah loo dhigay, waxa fiican inaad u tagto Lidl-kaaga ama aad si toos ah u wacdo adeegga farsamada ee Silvercrest si ay si ka sii wanaagsan kaaga caawiyaan.
Diisambar 28, 2018 markay ahayd 2:13 pm
Hello, waxaan haystay mishiinka lidka muddo 15 maalmood ah oo aan tijaabiyey shaki ayaa iga galay. Markii aan u rogay xulashada dhererka tolmada S2 Ma sii horumarin karo, waxay sii joogtaa bartamaha S1 iyo S2. Waa caadi?
Janaayo 8, 2019 markay ahayd 11:19 pm
Waa salaaman tihiin, boqorradii waxay ii keeneen laba mashiin oo dhar-tolid ah, tii qalin iyo heesaa ballan 1409. Mid aan doorto ma garanayo. Waxaan rabaa in aan ka tolo surwaal iyo jiinis oo aan sameeyo farshaxanno fudud. Waa mishiinkii iigu horreeyay waana inaan bartaa sida loo isticmaalo. Kee baad ila talisaa?
January 9, 2019 at 10:17 subaxnimo
Hi Nayr, xaaladaada waanu la joogi doonaa heesta asal ahaan sababtoo ah aad ayay kuugu fududaan doontaa inaad maamusho wixii dammaanad ah ama aad hesho qaybo dheeri ah.
February 6, 2019 at 11:15 waxaan ahay
Waxaa la i siiyay Silvercrest laakiin ka dib markaan akhriyo faallooyinka waxaan filayaa inaan ku fiicnaan lahaa inaan ku beddelo Fannaan ma ku beddelan karaa? Wali maan bilaabin.
Febraayo 7, 2019 markay ahayd 1:09 pm
Waad beddeli kartaa haddii aad haysato rasiidhka iibka oo aad xafido dhammaan baakooyinka. Waxa kaliya ee xun ayaa ah in aysan wali haysan kaydka heesta laakiin waxaad sugi kartaa Lidl inuu dib ugu celiyo iibka ama ka iibsado mid ka mid ah isku xirka aan ku leenahay shabakada.
February 15, 2019 at 1:15 waxaan ahay
salaan . Waxa aan soo iibiyay nooca mishiinka Silvercrest SNM 33 B2 Ilaa hadda wax dhibaato ah imay soo kulmin aad buuna u socdaa. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aan isticmaali karo irbado mataano ah qaabkan maadaama aan lagu sheegin tilmaamaha. Waad ku mahadsan tahay waxaana rajeynayaa jawaabtaada.
Febraayo 19, 2019 markay ahayd 10:32 pm
Salaamu calaykum qiimaha 69e?
Hi Gloria, haddii aanay iib ahayn, qiimuhu inta badan wax yar ayuu ka sarreeyaa.
Maarso 5, 2019 markay ahayd 4:33 pm
Hadda ilaa maanta waxaad ka iibsan kartaa servercrest online???
Maarso 6, 2019 markay ahayd 9:24 am
Waxaan eegnay shabakada internetka ee Lidl, ilaa maantadan la joogo, mishiinka qalinka ah ma soo baxayo. Midka kaliya ee soo baxa waa heesta laakiin wuxuu u muuqdaa mid ka baxay kaydka iyo qiimo ka sarreeya waxa aad ka heli karto dalabka boggayaga.
Maarso 5, 2019 markay ahayd 8:59 am
Waxaan rabaa in aan iibsado mishiinka tolida ee ugu horreeya, waxaanan arkay in Lidl uu leeyahay laba nooc, heesaa iyo Silver Crest, labada kee baad ku talinaysaa? Goorma ayay xayeysiisyada iibku inta badan soo baxaan? Ma jirtaa suurtogalnimada in lagu iibsado onlayn iyada oo aan la xayeysiin?
Maarso 5, 2019 markay ahayd 9:33 am
Mashiinka Silvercrest wuu ka jaban yahay Heesaaga iyo wixii dammaanad ah ama arrimaha qaybaha dheeriga ah, waxaad ku xirnaan doontaa Lidl.
Heesaaga wax yar ayuu ka qaalisan yahay, laakiin waxaad ka heli kartaa agabka dheeriga ah dukaan kasta oo mashiinka dharka lagu tolo iyo adeegyada farsamada ee Spain oo dhan, marka waa faa'iido la taaban karo marka ay la kulmaan dhibaato kasta oo suurtagal ah.
Waxaad ka iibsan kartaa online, boggayaga waxaad ku leedahay xiriir aad ku iibsato.
Annagu garan mayno taariikhaha dallacaadaha, mararka qaarkood waa 2 ama 3 biloodba mar, marar kalena 6 biloodba mar...waxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho buug-gacmeedka dalabyada. Sidoo kale waayadan dambe waxay had iyo jeer ku dhawaaqaan TV-ga si ay u sahlanaato in la ogaado.
Maarso 6, 2019 markay ahayd 12:15 am
Hello, waxaan haystaa mishiinka Silvercrest, ma haysto dammaanad, si fiican ayay u socotay ilaa roulette wheel S2 S1 uu sameeyay clack oo uu dib ii tolay, maxaan sameeyaa, sidee baan u xalin karaa?
Abriil 1, 2019 markay ahayd 7:37 pm
galab wanaagsan Nachos,
Waxaan ahay bilow, mishiinkee ayaad ku talin lahayd Dhaqan-Dhaqameedka Heesaaga 2282 ama The Singer Brilliance 6180?
Abriil 2, 2019 markay ahayd 9:47 am
Waxaan kuugu soo qorayaa faallada aad nooga tagtay mareegtayada tolida.
Labada nooc ee Fannaaniinta ah ee aad noo soo bandhigto, waxa ugu badan ee lagula talinayaa qofka ka bilaabaya adduunka ee mashiinka dharka lagu tolo waa Dhaqanka Fannaaniinta, waa moodel fudud laakiin wax kasta oo aad u baahan tahay inaad bilowdo oo aad qabato shaqo kasta.
Marka aad leedahay waayo-aragnimo kugu filan, waxaad samayn kartaa u boodboodka Brillnace 6180, kaas oo aad u dhammaystiran oo kakan.
13-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 6:39 pm
Salaan, waxaan haystaa mishiin qalin ah oo ay ku iibiyeen casaan, markii aan kala furfuray biinkii madbacadda dharka waan waayay, ma garanayo sida laakiin ma isticmaali karo la'aanteed sababtoo ah ma xiri karo wax dhar ah oo dhar ah, waan wacay. Adeeggii farsamada oo hadda igama iibin, sababtoo ah waa la joojiyay oo waxay iibiyaan oo keliya kuwa cusub. Mashiinku si fiican ayuu u shaqeeyaa oo hadda markaan sameeyo waxaan u tuurayaa gabal qiimahiisu yahay 5 ama 10 euro? Waxa aan dareemaa in la khiyaameeyay oo aan cidina caawinayn, mar dambena wax ka iibsan maayo astaantan, waxa aan aadi doonaa shirkadaha hormuudka ka ah halkaas oo aan wax dhib ah kala kulmin agabka spareparts-ka, laakiin waxa ay iga qariyeen shaqadi aan qabanayay oo hadda waa in aan lacag ku bixiyaa. mid cusub. fadeexad buuxda
13-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 8:12 pm
Wow, way iftiimeen.
Goorma ayaad iibsatay mishiinka? Tan waxaan kuu sheegayaa sababtoo ah adeegga farsamada waxaa ku waajib ah sharcigu inuu bixiyo qalabka dayactirka muddo 5 sano ah laga bilaabo taariikhda ay joogsato in la sameeyo.
Samee cilmi baaris yar oo ku saabsan mawduucaas oo haddii aad buuxiso shuruudaha, cabasho sababtoo ah waa inay ku siiyaan xal. Dabcan, hubaal waxay noqon doontaa hab tartiib tartiib ah, in kasta oo haddii aad ku sii socotid sharciga, weli way ku siinayaan oo uma baahnid inaad gudbiso cabasho nooc kasta ah.
July 16, 2019 saacadu markay tahay 8:57 pm
Salaan, maanta waxaan soo saaray mishiinkayga cusub ee silvercrest. Si fiican ayey u shaqeysaa, dhibaatadu waxay tahay inay wasakhayso dunta marka la tolo. Waxaan saaray dun cad oo waxay ka soo baxdaa madow, maaha xagga hoose ee bobbin, laakiin xagga sare. Waxaan u maleynayaa inay noqon karto saliid, haddii aan la isticmaalin, waxay jiidi doontaa xoogaa nasasho ah. Laakin wax badan ayaan tolay, oo maryo duug ah korkooda ayaan ka tolay, dhibkiina lama xalin. Waxa ay u muuqataa in ay wasakhdu ka yar tahay balse ay wali wasakhayso.
xal ma isiin kartaa? Waxa aan horeba u dhaawacay laba surwaal...
July 17, 2019 at 9:14 waxaan ahay
Runtu waxa ay tahay waxa aad sheegayso waa wax lala yaabo, waligayna maynaan maqal. Isku day inaad wacdo Silvercrest taageero farsamo si aad u aragto inay ku siin karaan xal, waxaad haysaa lambarka maqaalkan.
Sebtember 7, 2019 saacaddu markay ahayd 12:47 am
Waa maxay model? Sababtoo ah waxaan iibsaday 2 usbuuc ka hor waana SilverCrest 300024, oo igu kacay €55 waxaanan arkay in usbuucan uu jiro 315501 € 79… ..
Waa maxay farqiga u dhexeeya hal model ka kale?
July 17, 2019 saacadu markay tahay 7:37 pm
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada degdega ah ee Nacho, in kasta oo inta aan eego anigu ma arko lambarka adeegga farsamada ee maqaalka. Ma fududayn kartaa?
July 18, 2019 at 11:26 waxaan ahay
Waxaan kuu soo gudbinayaa:
-Lambarka adeegga macaamiisha ee Lidl (902 243 222) laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 20 galabnimo
Sebtember 8, 2019 at 6:28 pm
toli kara hoose ee daaha
Sebtember 9, 2019 saacaddu markay ahayd 9:32 am
Sebtember 9, 2019 at 5:28 pm
Hello, waxaan arkay 2 model
SNM 33 C1 oo ah 315501
SNM 33 B2 oo ah 300024
Labaduba waa 79,99 Euro. Waa maxay qaabka aad ku talinayso? Waxaan u arkaa 300024 mid aad u dhammaystiran marka loo eego agabka oo ay leedahay iftiin….laakin waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii 315501 uu leeyahay horumar ama horumarin lagu muujinayo. Mahad iyo salaan.
Oktoobar 2, 2019 markay tahay 10:28 pm
Hello! Waxaan sidoo kale shaki ka qabaa! Laakiin waxaan arkaa in aysan ka jawaabin su'aashaada, ama ugu yaraan ma arag! Miyaad ogaatay labada midkood kee fiican ama haddii ay isku mid yihiin?
Sebtember 10, 2019 saacaddu markay ahayd 9:51 am
Ma ka tolan kartaa guntooda labo jiinis ah? Waxaan waydiiyaa sababtoo ah waxay badanaa yihiin dhar qaro weyn. Mahadsanid.
Sebtember 10, 2019 saacaddu markay ahayd 10:07 am
Cirbadda saxda ah dhib kuma yeelan doontid. Waxay leedahay awood ku filan.
Sebtember 10, 2019 at 2:33 pm
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada degdega ah oo iga cafi jaahilnimadayda baaxadda leh, irbadda lagu tolo jiiniska ma la socotaa mishiinka mise waa inaad si gooni ah u soo iibsataa? Waa maxay nooca ama fasalka irbadu inay noqoto?
Aad baad ugu mahadsantahay wakhtigaaga iyo caawimadaada qiimaha leh, Nacho.
Noofambar 22, 2019 saacaddu markay ahayd 6:25 pm
wanaagsan, qof ii sheegi kara haddii mishiinka lidl si fiican u qaado tuubada
February 1, 2020 at 11:55 waxaan ahay
Haddii aad leedahay cudud xor ah
Abriil 19, 2020 markay ahayd 8:19 pm
Hello, galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto qayb dheeri ah oo loogu talagalay baallaha mashiinka tolida ee Silver Crest, iyo meesha aan ka heli karo. Aad baad u mahadsantahay.
Abriil 24, 2020 markay ahayd 11:34 am
Nacho fadlan, sarifka qalinku ma leeyahay qalab dheeri ah oo lagu lifaaqo?
June 3, 2020 at 1:15 waxaan ahay
Waxaan haystay mashiinka tolida ee Silvercrest muddo 3 sano ah si weyn ayayna aniga iigu shaqeysaa. Waxaan u isticmaalaa maalin kasta si aan uga dhigo shaqada dharka iyo balastarka. Si aad u bilowdo tolida waa wax weyn, maadaama ay leedahay hawlo badan oo ka baxsan aasaaska. Dabcan, sida horumar laga gaaray adduunkan tolida, waxaan rabnaa shaqooyin badan oo mashiinka ah, sida xaaladdeyda aan u baahanahay xarfaha qaar ka mid ah shaqooyinkayga, markaa waxaan kaliya u soo iibiyay mashiinka dharka kale ee arrimahan, inkastoo aan wali isticmaalo. Lidl's sababtoo ah waxay si fiican ugu shaqeysaa nooc kasta oo dhar ah, xitaa maqaar ama denim. Waa muhiim inaad daryeesho, nadiifiso oo aad si fiican u ilaaliso si ay u ahaato sida maalinta ugu horeysa.
Ogosto 29, 2020 markay tahay 8:07 pm
Galab wanaagsan!!!! Qofna ma garanayaa meesha aan ka heli karo biin mashiinka tolista daabacaadda naqshadeynta silvercrest? Waxaan waayay markii aan guri u guuray.‍♀️‍♀️‍♀️. Aad baad u mahadsantahay
Ogast 31, 2020 at 9:53 am
Hi Pilar, runtu waxay tahay in hadda aanan kuu sheegi karin. Way fiican tahay inaad wacdo Silvercrest taageero farsamo si aad u weydiiso.
Waxaad haysaa tirooyinka maqaalka.
Sebtember 7, 2020 at 11:22 pm
Hello, waxaan soo iibsaday mishiinkayga wax ka yar bil ka hor aad ayaan ugu farxay sababtoo ah aad ayay uga hadleen. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii ay tolida 12 waji-gashiga ah waxay bilaabeen inay sameeyaan buuq badan oo aad mooddo in farsamadu aanay shaqaynayn oo si lama filaan ah u istaagtay (samaynta buuqa sida in ay ku dheggan tahay) laakiin wax walba waxay u muuqdaan inay jiraan. Waxaad sugtaa, waxay mar kale shaqaynaysaa in yar ka dibna waxay ku soo noqotaa isla.
Waxoogaa niyad jab ah ayaa la kulma runta.
Sebtember 25, 2020 at 11:33 pm
Waxaan haystaa mishiinka Silvercrest laakiin giraangiraha duuliyahaygu wuu jabay, ma ogtahay meesha aan ka heli karo beddelka ama wax la mid ah?
Wax qabad weyn, mahadsanid hore.
Noofambar 1, 2020 saacaddu markay ahayd 10:39 pm
Waxaan haystaa Silvercrest, waxaan rabaa inaan iibsado cagaha wax lagu riixo wax fikrad ah kama haysto inay sareeyso ama hooseyso. qof ma ii sheegi karaa fadlan
Noofambar 19, 2020 saacaddu markay ahayd 12:30 pm
Hello. Waxaan haystaa kaliya mishiinka sawirka. Xiisadda dunta sare waa mid aad u xun. Waa inaan ku tolo 0 oo haddana mararka qaarkood aad ayay u cidhiidhi noqotaa markaad tolanayso oo ay fuushan tahay. Aafo.
Diisambar 4, 2020 markay ahayd 4:24 pm
Salaan, mishiinka tolida qalinka ahi miyay buunbuuniyaan? Mahadsanid!!
Diisambar 5, 2020 markay ahayd 12:59 pm
Waxay dib ugu celiyeen mashiinka Silvercrest iibka lidl. €85!!!!!!!
Diisambar 5, 2020 markay ahayd 5:31 pm
Waxaan rajeynayaa inaan soo iibsado mashiinka dharka lagu tolo si aan guriga uga bilaabo tolida. Hadda Lidl waxa uu kor u qaadayaa SiverCrest laakiin xiisahaydu waxa ay aad ugu sii jeedaan Dhaqanka Heesaha Lidl ee 2282 laakiin ma garanayo in aan sugo iyo in kale maadaama aanan garanayn in Lidl weli iibinayo.
Ma ii sheegi kartaa haddii ay sii iibinayaan sannad kasta? Oo haddii ay taasi jirto, miyay iibsadaan dhowr jeer sannadkii mise hal mar oo keliya? Haddii kale waxaan iibsan lahaa SilverCrest-ka ay hadda iibka u hayaan.
Diseembar 8, 2020 at 9:44 am
Inta badan waxay heystaan ​​mashiinka heesaha si joogta ah shabakadooda laakiin waxay ka saaraan marka ay bilaabaan Silvercrest si aysan ugu talaabsan iibinta hal nooc oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, qaabka Singer-ka maaha mid gaar u ah Lidl, waxaad u haysataa iibka goobo kale iyo qiimo la mid ah, markaa haddii aadan rabin inaad sugto, waad iibsan kartaa.
Midkee ayaan iibsanayaa… Waxaan doorbidayaa heesaaga sababtoo ah waa tad ka sarreeya laakiin wax walba wuu ka sarreeyaa sababtoo ah adeegga farsamada ee Singer wax shaqo ah kuma lahan Silvercrest's iyo haddii ay dhacdo dhibaato ama dammaanad kasta, Singer had iyo jeer waxay ka dhigtaa mid aad u fudud. Lidl si xun ugama jawaabo, laakiin way ka caajis badan tahay waxa isticmaalayaasha kale noo sheegeen.
Febraayo 7, 2021 markay ahayd 9:52 pm
Aad baad u mahadsantahay Nacho… waan sugi doonaa Fanaanada in kasta oo ay adagtahay in la helo.